Soomaaliya iyo Masar oo kala saxiixday Heshiis iskaashi dhanka caafimaadka ah | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Soomaaliya iyo Masar oo kala saxiixday Heshiis iskaashi dhanka caafimaadka ah
SNTV ;- Wasiirada Caafimaadka dalalka Soomaaliya iyo Masar Drs. Fowzia Abiikar iyo Drs Hala Zaid ayaa magaalada Qaahira ee Xarunta dalka Masar ku kala saxiixday heshiis Baratakool ee iskaashi una dhaxeeya wasaaradaha Caafimaadka ee labadan dal.
Dhanka kale Dr. Khalid Mujahid oo ah afhayeenka Wasaaradda Caafimaadka Masar ayaa sheegay in heshiiskani uu muhiimad gaar ah siinayo in Soomaaliya laga Caawiyo Caafimaadka Guud kan Qoyska iyo Hooyada iyo dhallaanka.
Waxaana qeybka ah gar-gaarka deg-degga iyo tababaro la xiriir adeegyada Caafimaadka sida adeegyo Iskaashi oo dhanka Caafimaadka ah oo dhaxmaro Labada dal.
Previous articleGantaallo lagu weeraray Israa’iil oo ay ku dhaawacmen ku dhawada lix ruux
Next articleEng. Yarisow “Waxaa naga go’an in dib loo dhiso Xarumihii danta guud ee Bulshada loogu adeegayay”